एनआरएनएको यो दुर्दशा किन र कसरि ? :: NepalPlus
एनआरएनएको यो दुर्दशा किन र कसरि ?
कृष्ण लामिछाने२०७८ फागुन २२ गते १९:२१
दुई दशक लामो ईतिहास् बोकेको प्रवाशी नेपालीहरुको एक मात्र साझा संस्था गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आज किन यस्तो परिस्थितिमा गुज्रिएको छ ? आजको गम्भिर प्रश्न हो यो । आजका समस्या निरुपण गर्न यसको उत्तर खोजिनुपर्छ । एउटा स्थापित संस्था । सबै प्रवाशी नेपालीको हक, हित र अधिकार, धर्म, रितिरिवाज, भाषा र संस्कृती लगायत् आर्थिक र राजनितिक अधिकार समेतकालागि लड्न स्थापित यो संस्थाको अवस्था गम्भिर बनाईएको छ । आजको अवस्थामा पुर्‍याउन र पुग्नकालागि जानि जानि लाग्नुभएका अग्रज लगायत् वर्तमान् समितिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेत्रित्वले जिम्मा लिई सम्पूर्ण नेपालीलाई एक बनाउन लाग्नुपर्ने बेलामा जिम्मेवार ब्यक्तिबाटै एकले अर्कोलाई खुइल्याउने कार्य भएको छ । यसले नेपालीलाई थप बिभाजन गरिरहेको छ । संस्थालाई झन झनकमजोर पारिरहेको छ । यो देख्दा साधारण पन्जिक्रित सदस्यहरुको मन कटक्क खान्छ । रपनि मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
कुनैपनि संस्थालाई जिवन्त राख्न, प्रवाहित गराईरहन निर्वाचन एक अभिन्न अंग हो । निर्वाचनबाट भाग्ने, तर्किने बहाना बनाउनु हामीजस्तो विकसित राष्ट्र, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बस्ने र प्रजातान्त्रिक पद्दती चाहनेकालागि सुहाउने कुरो होइन ।
संस्थाको नेत्रित्वकालागि मतदाताले रोज्ने हो नेत्रित्व । उमेदवारले मतदाताको मन जित्नसक्नुपर्छ । यो मेरो भोट र त्यो अर्काको भोट भन्ने कुरै हुँदैन । किनकि मतदाताले जसले राम्रो काम गर्छ, बिगतमा गरेको थियो र नेतृत्व गर्नसक्ने देख्छन् उसैलाइ रोज्छन् । मतदाताको मन मत हाल्ने अन्तिम क्षणमापनि बदलिन सक्छ । त्यसैले उम्मेदवारले यसको मत र त्यसको मत भनेर बस्नेनै होइन ।
आफ्नो देश र प्रवाशी नेपालीको हकहितमा काम गर्छु, सेवा गर्छु भन्ने कसम खाएर आएका एनआरएनएको कुनैपनि तहमा रहेका नेतृत्वकर्ताले सोच्नुपर्ने बेला छ । देश र प्रवाशीकालागि काम गर्छु भनेर कसम खाएर आउनुभएका अभियन्ताहरुले चिन्तनमनन गहिरोसितै गर्नुपर्ने बेला छ । नेतृत्व कालागि केहिबेर झुट बोलेपनि त्यसले राती सुत्नेबेलापनि आफ्नै मन पोल्नसक्छ । छाती चसक्क पार्न सक्छ ।
एनआरएनएको नेत्रित्व गरिसक्नुभएका पूर्व अध्यक्षहरुले मानसम्मान राम्रो पाउनुभएको थियो । संस्थाका आम सदस्यको उहाँहरुसित अपेक्षापनि थियो । तर उहाँहरुले आफूलाई दिईएको मानसम्मान जोगाउन सक्नुभएन । ति अपेक्षाहरु पुरा गर्न सक्नुभएन । यति भनिरहँदा कसैलाई चस्स लाग्ला । तर उहाँहरुकै कृयाकलापले सारा गैर आवाशीय नेपालीले दिएको सम्मान, आदर र अपेक्षा उहाँहरुले पुरा गर्न नसकेको छर्लङ्गै छ ।
त्यस्तो किन भयो । कारण स्पष्ठ छ । कुनै अमुक ब्यक्तिको पछाडी लाग्नुभयो । संस्थालाई बन्धक बनाउनुभयो । तपाई भूपू अध्यक्ष र संस्थापकहरुकै भूमिका त्यहि देखिन्छ ।
नेपालका केहि अमुक पार्टीको निकट पुग्ने र केहि स्वार्थी स्वनामका ठूला नेताहरुको पछि लागेर, तिनलाई खुशि बनाएर पार्टीको नाम भजाई सामाजिक संस्थाको नेत्रित्व हत्याउन खोज्नु गलत प्रव्रित्ति हो । संलग्नता र स्वार्थ पार्टीतिर अनि नेत्रित्व सामाजिक संस्थाको । यो कसरि सुहाउँछ ? यस्तो दोहोरो चरित्रलाई कसरि मतदाताले पत्याउने ? राजनितिक पार्टीको स्वार्थमै नेत्रित्व हत्याउन खोजेपछि राजनिति र सामाजिक कर्मलाई अलग देख्न चाहनेले कसरि स्विकार्न सक्छ ?
तर त्यसो भनिरहँदा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा रहेपनि सामाजिक काम गर्ने ब्यक्तित्वहरुलाई नेतृत्वमा लैजान आम मतदाता, एनआरएनहरु तयार छन् । तर जब एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थामा प्रवेश गरिन्छ तब पार्टीको नाम बेचेर एनआरएन्एलाई दुर्गन्धित बनाउन र पार्टीको नाम बेचेर खान भने पाइदैन । त्यसैले म फेरि भन्छु’ यो एनआरएनए भित्र कुनैपनि राजनितिक पार्टीको हस्तक्षेप, दबदबा, मनपरी र राजनितिक निहित स्वार्थ प्रवेश नहोस् ।
हिजो आजका एनआरएनए अभियन्ताहरु कुन कुन रुपका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएर आउनुभएको हो ? बिगतमा त्यस्ता राजनितिक आन्दोलनबाट आउनुभए होला । त्यो राम्रो हो । तर जब एनआरएनएमा प्रवेश गरिन्छ यो सामाजिक सेवा गर्नकालागि हो । राजनिति होइन । एनआरएनएमा त्यसलाई प्रवेश नगराउनुहोला । एनआरएनएलाई पार्टी राजनितिबाट परै राख्नुहोला । जतिखेर राजनितिक पार्टीलाई प्रवाशी नेपालीको खाँचो पर्छ त्यो बेला उनीहरु एनआरएनए खोज्दै आउँछन् । हामीले यो संस्थालाई त्यहि हैशियत, अडान र गौरवको बनाईराख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले हामी जाने होइन राजनितिक पार्टी खोज्दै कि उनीहरु आउनुपर्छ एनआरएनए खोज्न । यस्तो संस्था बनाउनेपनि हामीलेनै हो ।
एनआरएनएको नाम बेचेर केहि स्वनामधन्य ब्यक्तिहरुबाट एनआरएनएलाई कुनै न कुनै बहानामा ब्यापार र लगानीका नाममा बितृष्णा फैलाउने काम गरिएको छ । एनआरएनएलाई यो स्वार्थबाटपनि अलग राख्नुपर्छ । यस्ता ब्यक्तिहरुलेपनि सयौं, हजारौं एनआरएनले बनाएको यो संस्थालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
बिश्वभरि छरिएका आम नेपाली कसैका दास होइनन् । कुनै ब्यापारी वा राजनिति प्रेरितका ति हली बन्नपनि तयार छैनन् । हजारौं हजारले सामाजिक सेवा भावले बनाएको यो संस्थालाई राजनितिक वा ब्यापारिक स्वार्थमा राइँदलो गर्न दिने पक्षमापनि छैनन्, आम प्रवाशी नेपाली । ति नेपालीलाई राम्रोसित थाह छ, मत कसलाई, कस्तो ब्यक्तिलाई दिनुपर्छ । ति लाटा छैनन् । ति मतदाताको ठेक्का लिएझैं गर्नु, तिनलाई भजाउन खोज्नु जरुरि छैन । जसलाई नेत्रित्वको तिर्खा लाग्छ उसले तिनको मन जित्नसक्नुपर्छ ।
हरेक बैधानिक संस्थाको निति नियम हुन्छ । उसले विधान र नियमावली बनाएको हुन्छ । त्यो भनेको उसको स्वाश फेर्ने अक्सिजन भनेजस्तै हो । रक्तसंचार गराउने मुटु हो । धमनी हो । त्यसले आम सदस्य, नेत्रित्वकर्ता सबैलाई बाँधेको हुन्छ । संस्था त्यसैका आधारमा चल्छ । त्यहि विधि र विधान अनुसार चलिदिए संस्था अगाडि बढ्छ । नेत्रित्व गर्न चाहनेलाईपनि सहज हुन्छ ।
अहिले केहि मुठ्ठीभर मानिसहरु भनिरहेका छन्, हामी एनआरएनए केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर तिर्दैनौं । केन्द्रलाई तिर्छौं, आवद्दताबापत । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छाबी र ओज प्रयोग गरेबापत । त्यहि संस्थाको नाममा नेतृत्व गरेबापत तिर्छौं भनेर साधारण सदस्यबाट लिएको रकम अहिले तिर्दैनौं, दिन्नौं भनिरहेका छन् । साधारण सदस्यबाट जुन प्रयोजनकलागि लिएको हो त्यो नदिनु बैमानी, सदस्यहरुप्रतिको बदमासी र झुटो काम होइन ? अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा बसेर नेत्रित्व गर्ने, सान मान र पहुँच प्रयोग गरिसकेपछि शुल्कनै दिन्न भन्नु संस्थालाई फुटतिर लैजाने प्रयास हो ।
पूर्व र वर्तमान नेतृत्वकर्ताहरुले एक पटक छातीमा हात राखेर सोच्नुस् त, यो संस्थाको दूर्गति, विवाद, मानसम्मानमा पुगेको चोट र किचलो देख्दा तपाई हाम्रा सन्ततीले के भन्लान् ? यतिबिघ्न आरोप र प्रत्यारोप, झैझगडा देख्दा हाम्रा छोराछोरीले तपाई हामीलाई के भन्दाहुन् ? भन्न नसक्नेले के सोचेका होलान् ?
देश, समाज र आम प्रवाशीकालागि केहि गर्न संस्थामा पदनै लिनुपर्छ भन्नेपनि छैन । संस्था रहे पद रहने हो । त्यसैले पहिले त संस्था रहनुपर्‍यो । त्यो संस्था सम्मानित, गौरव महसुस गर्ने अवस्थामा रहनुपर्‍यो । संस्था रहे पो पद । इज्जत जोगाए पो इज्जतिलो पद । त्यसैले एक कदम पछि हटेरपनि संस्था जोगाउनतिर लागौं । संस्था रहे पद फेरिफेरि लिउँला, नेतृत्वमा बसौंला भन्ने बेला हो यो ।
एन आर एन एमा के मतदाता, चुनाव, महाधिवेशन र अझ मुख्य एजेण्डा भनेकै दुई वर्षको नेतृत्वकालागि मात्रै जस्तो गरिएको छ । नेतृत्वकालागि मात्रै बहस, हल्ला, किचलो र आकांक्षा देखिन्छ । के एनआरएनए भनेको खालि नेत्रित्वकालागि मात्रै हो त ? नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, युवा वर्गको नेतृत्व, ज्ञान र सिपको परिचालन, महजदूरहरुका हक र विमाको ब्यवस्था, भाषा र संस्कृतीको संरक्षण, आर्थिक लगानी के हुन् यि ? कता गए यि मुद्दा ? यि तमाम हाम्रा मूल मुद्दालाई विषयान्तर गरेर जतिखेरपनि नेतृत्वकै मात्रै चर्चा ? के एनआरएनए नेतृत्वकर्ताकालागि मात्रै हो र ?
यो संस्थामा युवाहरुलाई माया, अग्रजहरुलाई सम्मान, एक अर्काप्रति सम्मानित ब्यवहार, दायालु र मायालु भाव, शिष्ठतापूर्व आफ्ना तर्कको प्रतुति र उठान । के यस्तो बनाउन सकिंदैन ? हामी सबैले सोचौं ।
अहिले देखिएको समस्या खासमा भन्नुपर्दा प्रतिनिधि छनौटकोपनि होइन । यो त संस्थामा कसले कब्जा जमाउने भनेर निकालिएको विवाद हो । यसलाई विवाद बनाएर निर्वाचनकै विरोध गर्नु बरु निर्वाचनबाट भाग्ने खोज्ने प्रवृत्ती हो । यो प्रवृत्ती कत्तिपनि प्रजातान्त्रिक होइन । मान्न सकिंदैन ।
सामाजिक संस्थामा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्नेपनि हुँदैन । हुनुहुँदैन त्यस्तो । निर्वाचनबाटै भाग्न खोजेरपनि कहिं नेतृत्व चयन हुन्छ ? भाग खोजेर पाइन्छ ? प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित भएर आएर पो नेतृत्व, पद खोज्ने हो । सहमति, सहकार्य र सहयोग हुनुपर्नेमा यहाँ त माग र भाग खोजिएको छ । यस्तो कार्य सामाजिक संस्थामा हुनसक्दैन ।
अर्काथरिले फेरि काम चलाउको नारा दिईरहेका छन् । विधिसम्मत निर्वाचित भएर आएको र विधानत कार्यकाल थपिएको समिति पूर्ण अधिकारप्राप्त हो । विधानत अधिकारप्राप्त र वैधानिक हो । निर्वाचित र विधानत बनेको कार्य समिति कसरि काम चलाउ हुन्छ ? यस्तो समितिलाई पूर्ण अधिकार हुन्छ ।
त्यसैले मित्रहरु आउनुहोस् सबैले आफ्नो ईर्ष्या, दम्भ र विवाद छोडौं । यो संस्थालाई सबैको साझा बनाउँ । ७० लाख नेपालीकै एक साझा संस्था बनाउँ । आफ्नो शक्ति, राजनितिक नारा, ईगो, ब्यापारको स्वार्थ त्यागेर, दम्भ छोडौं । संस्थालाई एकजुट बनाउन हामी सबै लागौं ।
(लामिछाने एनआरएनए केन्द्रिय समितिका मानार्थ सदस्य तथा एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व केन्द्रिय सदस्य हुन्)